Fred Olsen Cruise Lines confirms St Kitts and Nevis for 2021-22 cruise season | Cruise Industry News
Ikhaya » Iindaba zoMsebenzi woHamba » UFred Olsen Cruise Lines uqinisekisa iSt Kitts kunye neNevis ngexesha lokuhamba ngolwandle ngo-2021-22
UFred Olsen Cruise Lines uqinisekisa iSt Kitts kunye neNevis ngexesha lokuhamba ngolwandle ngo-2021-22
Agasti 21, 2020
Imigca yeenqanawa zikaFred OlsenInkampani esekwe e-UK, yabhengeza ukuba i-Federation yase-St Kitts kunye ne-Nevis izakuba lizibuko lomnxeba kuhambo lwayo lowe-2021/2022. Izithuthi, ezilinganisela iwaka labakhweli ngenqanawa, ziya kumisa ezibukweni eSt Kitts 'ePort Zante njengenxalenye yeNkqubo yayo yoBusika beLanga. Ixhaswe yiNkqubo yoBumi beziqithi ngoTyalo-mali (i-CBI), iPort Zante yaphuculwa kunyaka ophelileyo ukuze yonyuse umthamo wenqanawa kwaye ngoku inokubamba iinqanawa ezikumgangatho wehlabathi ezintathu ngaxeshanye.
UFred Olsen uphinde wabamba ukhenketho olubonakalayo apho ngaphezulu kwe-50,000 yeendwendwe ezizayo ezinokubona izibuko elihleliweyo, kubandakanya iSt Kitts. Isizwe kutshanje sibhengeze ukuba sizakuvula imida yamanye amazwe ngo-Okthobha emva kokubhalisa amatyala ali-17 kuphela kunye nokufa kwabantu. Ukulungiselela ukuvulwa kwakhona, ama-5,000 abachaphazelekayo kushishino lokhenketho baya kuqeqeshwa.
ULindsay Grant, uMphathiswa wezoKhenketho, ubalule ukubaluleka kwentsebenziswano phakathi kweziqithi kunye neFred Olsen Cruise Lines: “Oku kubonisa ngokucacileyo ukuba umtsalane wesiqithi sethu, ukhenketho kunye neenkonzo zethu zinika isibheno esibalulekileyo kubakhenkethi abahamba ngenqanawa,” utshilo uMphathiswa Grant. “Ngoku, kunakuqala, njengoko silungiselela ukuphinda sivule ukhenketho, kubalulekile ukuba siqhubeke sisebenza kunye ukugcina imigangatho yemveliso yethu kunye nokuqinisekisa imigaqo-nkqubo yezempilo nokhuseleko ithotyelwa ngabo bonke abachaphazelekayo kwezokhenketho, ukubonelela undwendwe oluphambili amava. ”
Phambi kobhubhane we-COVID-19, icandelo lokuhamba ngenqanawa iSt Kitts kunye neNevis labona ukonyuka kwabakhenkethi beFlorida -Caribbean Cruise Association bayibiza njengendawo yokufikela. Ezi ziqithi-mbini 'ziye zafikelela kwinqanaba lesigidi sabakhweli beenqanawa zokuhamba ngeenqanawa kunyaka wesibini ngokulandelelana kwi-2019. Inkqubo yase-St Kitts kunye ne-Nevis ye-CBI ixhasa ukwanda kwePort Zante. Inkqubo ixhasa amalinge entlalo-qoqosho kwesi siqithi, ingakumbi kwicandelo lokhenketho.